Meizu E3: Famaritana sy daty fampisehoana | Androidsis
Voamarina ny daty famelabelarana Meizu E3
Meizu dia iray amin'ireo marika sinoa mitady hanamafy ny fisiany amin'ny tsena vaovao. Na dia marika iray aza ny iray amin'ireo tsy eo amin'ity MWC 2018. ity, saingy, satria manana drafitra hafa izy ireo. Araka ny ny 21 martsa dia mikarakara ny hetsika hataony ao an-tanànan'i Shanghai izy ireo. Amin'ity hetsika ity dia hanolotra ny findainy vaovao izy ireo amin'ity taona 2018. Anisan'izany ny Meizu F3.
Finday izay nianarantsika antsipiriany vitsivitsy tato anatin'ny herinandro. Hatramin'ny nisehoany tato amin'ny TENAA. Amin'izay mba hatreto dia efa manana antsipiriany ampy momba ity Meizu E3 ity isika. Inona no azontsika antenaina amin'ny telefaona?
Toa ny zava-baovao ialan'ity modely ity no hamela antsika dia ny mpikirakira azy. Satria hampiasa Helio P70 ny telefaona, Processeur vaovao an'ny MediaTek izay mbola tsy natolotra akory. Izy io dia processeur izay araka ny mari-pahaizana navoaka hatreto Mitovy amin'ny Snapdragon 670. Noho izany dia mpanodina mid-range izy io.
Raha ny RAM, Meizu E3 ity dia mety tsy hitovy amin'ny 4 sy 6 GB. Hisy safidy maromaro ihany koa amin'ny resaka fitehirizana anatiny (32, 64 ary 128 GB). Angamba ny dikan-telefaona misy RAM 6 GB dia natokana ho an'ireo izay manana tahiry anatiny kokoa. Farafaharatsiny, izany matetika no mahazatra.
Ny telefaona dia antenaina hanana Efijery 5,99-inch miaraka amin'ny vahaolana feno HD +. Ankoatr'izay dia hanana efijery misy zana-kazo manify izy, ka midika izany fa hisy ny tahan'ny 18: 9. Ka ity Meizu E3 ity koa dia manampy amin'ny lamaody. Momba ny fakantsary, ao aoriana dia hisy ny MP 12 + 20 avo roa heny. Ho fanampin'izany, hanana telefaona ny Bateria 3.300 mAh.
Araka ny hitanao izao, efa fantatray ny antsipiriany ampy momba an'ity Meizu E3 ity. Saika ny zava-drehetra, koa ny vidiny, izay ho mihoatra ny latsaka 229 euros Amin'ny fanovana. Ny sisa tazantsika dia ny sary ofisialy voalohany amin'ny telefaona. Soa ihany, amin'ny 21 martsa dia hamela fisalasalana isika ary ho fantatsika ny momba an'ity telefaona ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Meizu » Voamarina ny daty famelabelarana Meizu E3
Tonga any amin'ny Facebook ihany koa ireo naoty audio
Ny Honor 7C dia haseho amin'ny 12 martsa ho avy izao